6 uzo Mo Nso gbanwe ndu anyi | Ilblogdellafede
6 uzo Mo Nso na agbanwe ndu anyi
Mmụọ Nsọ na-enye ndị kwere ekwe ike ibi ndụ dịka Jizọs na ịbụ onye àmà nwere obi ike. N’ezie, enwere ọtụtụ ụzọ ọ na-esi eme nke a, yabụ anyị ga-ekwu maka ndị kachasị.
Jizọs kwuru na Jọn 16: 7 na ọ bụ maka abamuru anyị ka ọ gara ịnata Mmụọ Nsọ:
“N’ezie, ị ka mma ịpụ, n’ihi na ọ bụrụ na m emeghị, onye ọka iwu agaghị abịa. Ọ bụrụ na m pụọ, aga m ezitere gị ya. "
Ọ bụrụ na Jizọs kwuru na ọ ka mma ka anyị pụọ, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị n'ihi na o nwere ihe dị oke ọnụ n'ihe mmụọ nsọ chọrọ ime. Lee otu ihe atụ na-enye anyị amamịghe siri ike:
“Ma ị ga-anata ike mgbe Mụọ Nsọ ga-adakwasị gị. Nụ ga-abụkwa ndị akaebe m, ndị ga-ekwu banyere m ebe niile, na Jerusalem, na Judia niile, na Sameria na nsọtụ ụwa ”(Ọlụ Ndịozi 1: 8).
Site na Akwukwo Nsọ a, anyị nwere ike ịchịkọta echiche nke ihe mmụọ nsọ na-eme na ndụ Onye Kraịst. Ọ na-eziga anyị dịka ndị akaebe ma nye anyị ike ịme nke ọma.
Anyi ga achoputa ihe ndi ozo nke Mmuo Nso n’eme ndu ndi Kristian, yabụ jide iko mmasi nke ife karie ka anyi tinye n’ime mmiri!
Kedu ka mmụọ nsọ si arụ ọrụ?
Dịka m kwuru na mbụ, enwere ọtụtụ ụzọ Mmụọ Nsọ na-arụ ọrụ na ndụ nke ndị Kraịst, mana ha niile nwere otu ebumnuche ha: ime ka anyị bụrụ ndị dịka Jizọs Kraịst.
Na-arụ ọrụ na ndị kwere ekwe site na ime ka uche anyị dị ka uche nke Kraịst. Ọ na - eme nke a site na ịma anyị ikpe maka mmehie na iduga anyị na nchegharị.
Site na nchegharị, ọ na - ehichapụ ihe ruru unyi n’ime anyị ma nye anyị ohere ịmị ezi mkpụrụ. Ọ bụrụ na anyị ekwe ka ha nọgide na-enye mkpụrụ osisi ahụ, anyị na-eto ịdị ka Jizọs.
“Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọ, njide onwe onye; imegide ihe ndia adighi iwu ”(Ndi Galetia 5: 22-23).
Mụọ Nsọ na arụ ọrụ n’ime anyị site n’okwu nke Chineke Jiri ike nke Akwụkwọ Nsọ maa anyị ikpe ma na-emetụta echiche anyị. Ọ na-eme nke a iji mee ka anyị bụrụ ndị Chineke.
2 Timoti 3: 16-17 kwuru na "Akwụkwọ Nsọ dum sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ na - enye aka ịkụziri anyị ihe bụ eziokwu na ime ka anyị ghọta ihe dị njọ na ndụ anyị. Ọ na-adọ anyị aka ná ntị mgbe anyị mehiere ma na-akụziri anyị ime ihe ziri ezi. Chineke jiri ya kwadebe ma kwado ndị ya ịrụ ọrụ ọ bụla dị mma.
Dịka anyị na e wulite mmekọrịta chiri anya na Mmụọ Nsọ, ọ ga-emekwa ka anyị ghara inweta ihe ndị anyị nwere na ndụ anyị na-anaghị amasị ya. Nke a nwere ike ịdị mfe dịka egwu na-ekwesịghị ekwesị na-abụrụ anyị ihe na-adịghị mma n'ihi ozi na-adịghị mma ọ na-eburu, dịka ọmụmaatụ.
Isi okwu bụ, mgbe ọ na-arụ ọrụ na ndụ gị, a na-ahụ ihe niile gbara gị gburugburu.
1. Ọ na-eme ka anyị dị ka Kraịst
Anyị amaralarị na ebumnuche nke ọrụ nke Mmụọ Nsọ bụ ime ka anyị bụrụ ndị dịka Jizọs, mana olee otu ọ ga-esi mee nke ahụ? Ọ bụ usoro akpọrọ nsọ. Ma e-e, ọ bụghị dị ka gbagwojuru anya ka ọ na-ada!
Odudons] b the usoro nke Mm] Ns] onye nke nap ourp our omume any sinful nke mmehie ma d usbuga any into dliness ns]. Chee ka esi egbutu yabasị. Enwere akwa.
Ndị Kọlọsi 2:11 kọwara na “mgbe ị bịakwutere Kraịst,“ e birila gị úgwù, ”ma ọ bụghị site na usoro anụ ahụ. Kraist luru Mo nke Mo Nso - igbubi udi nke nmehie. "
Mụọ Nsọ na arụ ọrụ n’ime anyị site n’iwezuga njirimara nke mmehie anyị ma were ọdịdị Chineke dochie ya. Ọrụ Ya n’ime anyị na-eme ka anyị bụrụkwuo sọsọ ka Jizọs.
2. O nenye anyi ike igba akaebe
Dika Ọrụ 1: 8 kwuru, Mọ Nsọ nyere ndi Kraist ike ka ha bụrụ ndi akaebe dị mma banyere Jizọs Kraịst. Ọ na-enye anyị ohere iji gbaa ama nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'ọnọdụ anyị ga-atụkarị ụjọ ma ọ bụ ụjọ.
"N'ihi na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke ụjọ na ihere, kama nke ike, ihu na njide onwe onye" (2 Timothy 1: 7).
Ike nke Mmuo Nso naenye anyi bu ihe ndi n’egosiputa ma n’anu ma ya. Ọ na-enye anyị ike, ịhụnanya na ọzụzụ onwe anyị.
Ike nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe nke Mmụọ Nsọ na-akwado, dịka oke ikwusa ozi ọma na ike iji rụọ ọrụ ebube.
Lovehụnanya nke Mmụọ Nsọ nyere na-apụta ìhè mgbe anyị nwere obi ịhụ ndị ọzọ n'anya dịka Jizọs ga-eme.
Mmụta onwe nke mmụọ nsọ na-enye na-eme ka mmadụ na-eme uche Chineke ma nwee amamihe na ndụ ya niile.
3. Muo nso duru anyi baa n'eziokwu
Utu aha mara mma nke Jizọs kpọrọ Mmụọ Nsọ bụ "mmụọ nke eziokwu". Were Jọn 16:13 dịka ọmụmaatụ:
“Mgbe Mụọ nke eziokwu ahụ bịara, Ọ ga-eduzi unu n’eziokwu niile. Ọ gaghị ekwuchitere onwe ya, kama ọ ga-agwa gị ihe ọ nụrụ. Ọ ga-agwa gị ihe ọdịnihu ga-abụ. "
Ihe Jizọs na-agwa anyị n’ebe a bụ na mgbe anyị nwere Mmụọ Nsọ na ndụ anyị, Ọ ga na-eduzi anyị n’ụzọ anyị kwesịrị ije. Mụọ Nsọ agaghị ahapụ anyị ihe mgbagwoju anya kama ọ ga-ekpughere anyị eziokwu. Gosipụta ọnọdụ ndị gbara ọchịchịrị nke ndụ anyị iji mee ka anyị hụ ọhụụ banyere nzube Chineke maka anyị.
“N'ihi na Chineke abụghị Chineke nke aghara, kama nke udo. Dịka n'ụlọ nzukọ nile nke ndị nsọ ”(1 Ndị Kọrịnt 14:33).
Ọ na-aga n’agwaghị ya na mmụọ nsọ bụ onye isi anyị, ndị na-eso ya bụ ụmụ ya ndị nwoke na ụmụ nwanyị.
Ndị Rom 8: 14-17 na-ekwu “N'ihi na ndị niile bụ mmụọ nke Chineke na-eduzi, ha bụ ụmụ nke Chukwu. Kama, unu natara Mụọ nke Chineke mgbe Ọ nabatara unu dịka ụmụ Ya ”.
4. Muo nso n’eme ka anyi mehie
Nihi na Mo nso na aru oru ime ka anyi di ka Jisos, Ochoputara anyi ikpe mmehie anyi.
Mmehie bụ ihe na-akpasu Chineke iwe mgbe niile ma na-egbochi anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere mmehie, nke anyị mere, ọ ga-ewetara anyị mmehie ndị a.
Aga m ekwughachi nkwupụta a: "nkwenye bụ ezigbo enyi gị". Ọ bụrụ n’anyị akwụsị inwe nkwenye, mgbe ahụ anyị nwere nnukwu nsogbu. Dịka Jọn 16: 8 kwuru, "Mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-ama ụwa ikpe gbasara mmehie, ezi omume na ikpe."
Nkwenye na-abịa tupu mmehie emee. Mụọ Nsọ ga-ebido metụ gị n’obi mgbe ọnwụnwa bịara.
Ọ bụ ọrụ anyị ịzaghachi nkwenye a.
Ọnwụnwa n’onwe ya abụghị mmehie. A nwara Jizọs ma o meghị mmehie. Inye ọnwụnwa bụ ihe na-eduga ná mmehie. Mụọ Nsọ ga-akpali obi gị tupu imegharị ahụ. Gee ya ntị.
5. Ọ na-ekpughere anyị Okwu Chineke
Mgbe Jizọs jere n'ụwa a, ọ kuziri ihe niile ọ gara.
Ebe ọ nọghị ebe a na anụ ahụ, mmụọ nsọ ewerela ọrụ ahụ. Ọ na-eme nke a site na-ekpughere anyị okwu Chineke n'ime Akwụkwọ Nsọ.
Akwụkwọ Nsọ n'onwe ya zuru oke ma bụrụ onye a tụkwasịrị obi, ma enweghị ike ịghọta ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ. 2 Timoti 3:16 na-ekwu na “Akwụkwọ-nsọ ​​nile sitere n'ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru n'ịkụziri anyị ihe bụ eziokwu na ime ka anyị ghọta ihe ọjọọ na ndụ anyị. Ọ na-adọ anyị aka ná ntị mgbe anyị mere ihe ọjọọ ma na-akụziri anyị ime ihe ziri ezi “.
Mụọ Nsọ na-akuzi ma na-ekpughere Ndị Kraịst ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara dịka Jizọs gaara eme.
"Ma Onye Inyeaka ahụ, bụ Mmụọ Nsọ, onye Nna ga-ezite n'aha m, ga-akuziri gị ihe niile ma chetara gị ihe m gwara gị" (Jọn 14:26).
6. Ọ na-ewetara anyị nso ndị kwere ekwe ndị ọzọ
Ihe mbu m choro imetu bu idi n’otu nke Mo Nso wetara.
Ọlụ Ndịozi 4:32 kwuru sị “Ndị niile kwere ekwe jikọtara n'obi na n'uche. Ha chekwara na ihe ha nwere abụghị nke ha, ya mere ha kere ihe niile ha nwere. Akwụkwọ akwụkwọ Ọrụ na - akọwa ụka mbụ mgbe enwetachara mmụọ nsọ. Ọ bụ Mmụọ Nsọ nke Chukwu wetara ụdị ịdị n'otu a. Nke a bụ ịdị n'otu dị anyị mkpa n'ime ahụ nke Kraịst taa.
Ọ bụrụ n’anyị abịaru nso na Mmụọ Nsọ. Ọ ga-etinye ịhụnanya n’ime obi anyị maka ụmụnne anyị nwoke na aka anyị ga-eme ka anyị dịrị n’otu.
Ever nụtụla mgbe okwu ahụ bụ "Enwere ike na ọnụọgụ"? Mụọ Nsọ matara nke a ma nwaa ịghọta ikike ahụ n’ime ụka. Anyị onwe anyị bụ́ Ndị Kraịst kwesịrị itinyekwu oge n'ịghọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ banyere ịdị n'otu na itinye ha n'ọrụ ná ndụ kwa ụbọchị.
Gbalịa ịmatakwu onye ị bụ nke ọma
Mgbe anyị matara ihe Mọ Nsọ na-eme na ndụ ndị kwere ekwe, ekpere m bụ ka obi gị ghe oghe nye ya. Were ihe ndi imuta ma soro ndi enyi choro Mmuo Nso karia. Anyị nwere ike iji karịa ya mgbe niile.
Ugbu a bụ oge anyị kwesịrị ị mata mmụọ nsọ nke ọma. Choputa ihe ndi ozo ma choputa onyinye nke Mo Nso.
← Na post gara aga Gara aga post:Ihe ndi mmadu na enweta ego nke Vatican iji tinye uche na coronavirus
Ọzọ Post → Post ozo:Ekpere nke August 5 ụbọchị ọmụmụ nke Nwanyị nwanyị anyị